Sneakers iyo iskaashi xariif ku ah cunnooyinka 'kabaha isboortiga' | Abuurista khadka tooska ah
Sneakers iyo iskaashi xariif ku ah cunnooyinka 'kabahaaga'
Jose Angel | | Fanaaniin, Naqshadeynta Webka
Labada adduunba waxay u muuqdaan kuwo aad u kala duwan. Qof kasta oo ku lug leh dhar iyo cunto wuxuu noqdaa la yaab. Waa goor hore in qofka bini aadamka ah ee maanta jiraa, uu ku xidhiidhiyo tayo liidata dharka isku daraya labadan shay. Ama si fudud u xalliso dharka xayeysiinta shaqaalaha ka shaqeeya shirkad weyn. Kabaha dacaska ah iyo cuntadu waa isku mid.
Haddii aan ku riixno olole 'MCdonalds' Nike tani waxay noqon kartaa masiibo, ama maya. Kuwani waa isku-darka soo socda ee aan ku tusi doonno, oo laga yaabo inaad jeceshahay wax badan ama ka yar, laakiin kuwaas oo asal ah, ugu yaraan. Miyaad iibsan lahayd isku-dhafkan weyn?
1 Pizza Hut Pie Dhalada II
2 Kith x Coca Cola Wadahadal
3 Ku daawee naftaada Nike Air Max 90
5 Momofuku oo ay weheliso Nike.
Pizza Hut Pie Dhalada II
Fiiri astaamaha Pizza Hut ee kore dhinacyaduna xoogaa way dheer yihiin, laakiin naqshadda guud ee kabaha isboorti ma xuma haba yaraatee. Sidoo kale, kabahaasi waxay dalban karaan PIZZA. Taasi waa in lagu tiriyaa wax.
Haa, tani maahan kaftan. Dalbashada pizza leh dacasaddan waa mid aad u fudud. Gudaha carrabka kabaha waxaa jira batoon ku xiran taleefankaaga si aad amarkaaga ugu dhigto isla markiiba. Dejinta waxay ku saabsan tahay inaad ku sameyso taleefankaaga casriga ah. Wax aan maanta ahayn wax aad loola yaabo. The Pie Tops II waxay kudarsanayaan muuqaal dheeri ah kabaha bidix: badhan labaad oo hakin kara TV-gaaga (aragti ahaan, si aad uga degtid sariirta oo aad uheli kartid biiskaaga). Xaaladdan oo kale, Pizza Hut weli ma uusan sharraxin sida shaqadani noqon doonto ama sida loo fulinayo. Laakiin ma aha fikrad xun.
Kith x Coca Cola Wadahadal
Kuwani Isweydaarsiga Calaamadaha Coca-Cola Si Wanaagsan Ayaa U Fiicanintaad geesi ku tahay inaad wadooyinka magaalada ku gasho kabo ka samaysan maro cad. Waxaa lasii daayay Ogosto 2017 iyagoo la kaashanaya astaanta dharka caanka ah ee Kith. Eeg horudhac ah sida kabaha u egyihiin fiidiyaha.
Ku daawee naftaada Nike Air Max 90
Naqshadaynta Air Max waxaa dhiirrigeliya macmacaan Ingiriis ah oo la yiraahdo "Eton Mess" oo ah khudaar cagaaran, kareem iyo meringue. Midabadaas waxaa lagu arki karaa faahfaahinta kabaha iyo midabka xarfaha NIKE ee la jaan qaadaya midabka. Xiisaddu waxay ku jirtaa gudaha, taas oo Ingiriisiga cad, ay ku qoran tahay ereyada "Daawee naftaada." Ama maxaa la mid ah "Isdaawee naftaada".
Nike waxay u xilsaartay dharbaaxayahan loo yaqaan 'Krispy Kreme' ee loo yaqaan 'sneaker sneaker' sida jilitaanka NBA xiddigga Kyrie Irving ee jacaylka donuts. Markii labaad ee qoritaanka saxeexa Irving, waxay naqshadda ka soo qaateen sanduuqa 'Krispy Kreme' oo ay ku dhex shubeen jirka kabihiisi. Waa wax walba oo lagu sharfayo jacaylka Kyrie ee donuts, iyo sidoo kale dhaqankiisa ah inuu macmacaan ugu keeno qolka labiska inta lagu gudajiray sanadkiisii ​​rookie.
Momofuku oo ay weheliso Nike.
Maxaa laga yaabaa inuu ahaa iskaashiga ugu wanaagsan ee sumadda cuntada, wuxuu la kulmaa kabo isboorti, Nike waxay billowday SB Dunk bishii Juun ee la soo dhaafay iyada oo loogu talagalay abaalmarinta xiddigga caanka ah David Chang iyo makhaayadaha uu ku guuleysto ee Momofuku. Ciyaaraha mugdiga ah ee mugdiga ah ee ay xidhaan kuwa cuntada kariyeyaasha ah ee makhaayadooda, iyo basbaaska cidhibta ku yaal waa astaanta Momofuku. Kabaha hoos u dhaca ayaa sidoo kale loo adeegsaday in lagu tijaabiyo habka cusub ee shirkadda Nike ay ugu furto kabaha iyadoo la adeegsanayo xaqiiqda la kordhiyay iyo tikniyoolajiyadda casriga ah.
Kaliya waxaa laga heli karaa iskaashiga APP mobilkaaga. Dhacdo casri ah oo uu ku soo bandhigayo isboorti bartamaha fagaaraha. Sidii ay ahayd dhacdadii ugu dambaysay ee Shisheeyaha. Hab ka duwan.
Xaaladdan oo kale, noocyada kabaha ayaa ikhtiraacaya qaab cusub. Kaliya kuma eka heerka bilicsanaanta sida ay ugu jiraan kiiskan gaarka ah. Halkii ay ka ahayd soo bandhigiddeeda. Wadashaqeynta noocyadan iyo qaabkan kaliya waxay soo bandhigayaan hal shay: gaar ahaaneed. Dabcan way shaqaysaa
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Naqshadeynta Webka » Sneakers iyo iskaashi xariif ku ah cunnooyinka 'kabahaaga'
Ku darso naqshadeynta garaafka moodada
Kula tali buugaagtan qof bilaabaya inuu naqshadeeyo